Ikotishi elithandekayo endaweni yase-idyllic Hampshire - I-Airbnb
Ikotishi elithandekayo endaweni yase-idyllic Hampshire
Greywell, England, i-United Kingdom
Itholakala maphakathi nedolobhana elihle laseGreywell, i-Annex inamagumbi okulala ama-2 nombhede usofa. Kukhona indawo enkulu yokuhlala/yokudlela enegumbi lokugezela (ishawa) nekhishi. Phezulu kukhona igumbi elikhulu eliphindwe kabili elinemishayo emangalisayo eveziwe kanye negumbi lokulala elilodwa.
UGreywell unokuhamba okumangalisayo okungapheli (imifula, umsele we-basengstoke, izinkuni). Kungamamayela angu-2 kuphela ukusuka e-Odiham yomlando, amamayela angu-2 ukusuka eHook (enesiteshi esikhulu esiya eWaterloo), amamayela angu-5 ukusuka eBasingstoke.
I-pub yedolobhana enhle kakhulu.
Isijobelelo endlini enkulu. Indawo yokuhlala ephansi enepulani evulekile yokuhlala / indawo yokudlela enombhede usofa uma kudingeka. Igumbi lokugezela elineshawa yamandla. Ikhishi elifakwe ngokugcwele. Igumbi eliphezulu elikhulu eliphindwe kabili elinegumbi elilodwa elincane ngaphandle kwalo.
Ngijabule ukuphendula imibuzo
Hlola ezinye izinketho ezise- Greywell namaphethelo